Xog ku saabsan COVID19 | IPRT
Wax ka Baro COVID-19
Had iyo jeer gacmahaaga ku maydh biyo iyo saabuun, ama ku masax gacan nadiidiye ka samaysan alkool.
U jirso masaafo dhan illaa hal mitir (3 fuudh) qof ka hindhisaya ama qufacaya.
Iska ilaali inaad taabato indhahaaga, sankaaga ama afkaaga.
Hubi adiga iyo inta dadka kugu xeeran inay qaataan fayo-dhawrka haboon. Taasi oo macnaheedu tahay inaad afkaaga iyo sankaaga aad ku daboosho xusulkaaga oo laaban ama masar ama softi marka aad qufucayso ama hindhisayso. Ka dibna masarka ama softiga aad isticmaashay qashin-qubka ku rid isla markiiba.
Hadaad dareemayso xanuun gurigaaga jog. Haddaad leedahay xumad, qufac ama neefta oo kugu adkaata, raadi gargaar caafimaad, isla markaana garaac numberka 988. Had iyo jeer la soco timaamaha iyo hagaha cudurka COVID-19 ee ka soo baxaya Wasaaradda Horumarinta Caafimaadka Somaliland. Iskaa ha u tagin goob caafimaad, had iyo jeer sii wac si laguugu hago sida ugu haboon ee iyo goobta aad tagi karto. Waayo markasta waxa laga hortagayaa in adiga lagu ilaaliyo isla markaana laga hortago fiditaanka fayruska.
La soco goobaha iyo magaalooyinka uu cudurku ka dilaacay. Hadday kuu suurtagal tahay inka ilaali inaad safarto, gaar ahaan haddaan tahay qof weyn ama leh xanuunadda macaanka, wadnaha iyo kuwa ku dhaca sanbabadda.
Waayo sababtu maxay tahay? Waxa aad halis weyn ugu jirtaa inuu kugu dhaco COVID-19.